Villa Somalia oo Jawaab Rasmi ah ka Bixisay In Madaxwayne Farmaajo Haysto Dhalasho kele iyo Arinta Jaaliyaddii Buffalo | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Villa Somalia oo Jawaab Rasmi ah ka Bixisay In Madaxwayne Farmaajo Haysto Dhalasho kele iyo Arinta Jaaliyaddii Buffalo
Muqdisho ( Kalshaale ) Sannadkii 2019 ayay Madaxtooyadda Somaliya baahisay xogta ah in Madaxweyne Farmaajo uu iska celiyey dhalashadii uu ka haystay dalka Maraykanka, iyaga oo sheegay in si iskii ah uu u go’aansaday, Iyadoo bilaabatay tan iyo markii madaxweynaha uu xilka qabtay 2017.
Farmaajo ayaa tegay dalka Mareykanka, sannadkii 1985, wuxuu xilligaas ahaa diblomaasi dhallinyaro ah oo ka tirsanaa Safaaradda Soomaaliya, Ka dib markii soomaaliya ay ka bilowdeen dagaalladii sokeeye, wuxuu go’aansaday inuu sii joogo. Sida ay qortay New York Times, nin ay saaxiibo yihiin oo sida oo kalena qaraabo ay yihiin Farmaajo wuxuu sheegay in uu markii hore magangalyo siyaasadeed ka dalbaday Canada, halkaas oo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalihiis, markii dambena uu helay baasaboor Canada.
Wargeyska New York Times, wuxuu sheegay in aanay wax falcelin ah ka helin dhanka dawladda, laakiin BBC Somali oo la xidhiidhay waaxda warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya waxay kaga jawaabeen in aanay arrintaas haba yaraatee, waxba ka jirin.
“Waan akhriyey waxa wargeyska uu qoray. Run ahaantii warar aan sal iyo raad lahayn ayaa ku jira.”
“Madaxweynahu waxa uu haystaa baasaboorka Soomaaliya, hore na wuxuu u haystay ka Maraykanka, waana kii iska dhiibey madaxweynuhu, si uu shaqadan uu u dhaartay ee madaxtinnimo ee dalka uu si hufan ugu guto. Ma jirto markaa dal kale oo dhalashadiisa uu haysto oo aan ka ahayn Soomaaliya”. Ayuu yidhi Cabdirashiid Xaashi oo madaxa xafiiska warfaafinta Villa Somaliya
Warbixinta uu qoray, wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee New York Times, waxaa lagu sheegay in xilligii Madaxweyne Farmaajo iska celiyey dhalashada waddankaas, ay muddo u dhaw ku bilaabatay baadhista kiis dacwadeed khuseeya dhanka cashuur celinta.
“Sababta madaxweynuhu u celiyey baasaboorka Maraykanka waa sheeko dheer, faahfaahinteedana aan hore u bixinnay, kuma jirto marnaba in uu sababo kale u dhiibay, haba yaraatee in madaxweynaha Jamhuuriyadda aan weligii lagu soo oogin wax dacwad ah” ayuu yidhi Cabdirashiid Xaashi, Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya.
Dhanka kale, waxaa in badan baraha bulshada ku soo noqnoqatay eedaynta ku aaddan in Madaxweyne Farmaajo uu qayb ka ahaa “isqabqabsiyo ka dhex dhacay ururradii ama jaaliyaddii Buffalo Soomaalida ee Maraykanka”, gaar ahaan xilli uu xil maamula ka hayey “uuna isku deyey in uu laba sano oo dheeraada ku darsado.”
Isla arrintaasna xafiiska warfaafinta Villa Somaliya wuxuu ku tilmaamay been abuur iyo waxba kama jiran. “Madaxweynhu horta marnaba guddoomiye kama noqon jaaliyad Soomaaliyeed, Way jirtaa in uu ahaa abaabule aqoonyahan ah, dhanka siyaasaddana uu ku jiray oo xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, labadana u soo shaqeeyey. Balse marnaba ma dhex gelin (jaaliyadda), guddoonna uma noqon, intii uu halkaa joogay, rag badan baa caan ku ahaa oo la weydiin karaa reer buffalo-na ay yaqaannaan. ” ayuu yidhi Cabdirashiid Maxamed Xaashi .
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=43274
42 Comments for “Villa Somalia oo Jawaab Rasmi ah ka Bixisay In Madaxwayne Farmaajo Haysto Dhalasho kele iyo Arinta Jaaliyaddii Buffalo”
May 3, 2021 - 6:54 pm
Allaa Wayn oo Waaxid ah
Ceeb u dhimo ee dhinac noo dhaaf
Macangagnimadii ayuu ku darsadey TUUGONIMO
MUSUQ MAASUQA iyo XIL JECLI.
Orod oo Tuulooyinkii Alley badey Maamul aad waligaa joogto
u sameeyso, MAAMULKA BANAADIR radgaa Dhiig iyo maal iyo mulginimo u soo hurey.
Yaa dhan noo dhaafiyo
May 4, 2021 - 1:47 pm
Awal baan calaacalkii la khaatiyaan ka taagnayne, imminkana ma habaar baad ku darsatay.
Kaalay dabshid ma habar baa mise habro ayuu la koray?
Unukaa leh, Soomaali kuma maamuli kartid adeer. Dalka haddii aad rajo ka qabtid inaad xukunto isku day inaad wax ku raadsato soomaalinimo, kollay tuugnimo iyo musuq lagaaga maaara waaye.
Haddii aad tiraahdid goofkaan unukaa leh, dee taa soomaali kuma xukumi kartid. Haddii aad leedahay meeshan caasimad soomaaliyeed maahan ee “unukaa iskalena” dee waa hagaage waxaad u samaysataa maamul Unuka-Land la yiraahdo, annaguna markaa waxaan kuu ballan qaadaynaa inaan cidna kugula tartamin. Illeen waa Unuka-Land e’
May 3, 2021 - 7:31 pm
waar horta kan Dabshidku miyuusan Soomin? ileen waxan uu ku hadlaayo qof Sooman oo weliba ku jira 19 kii dambe dembiga intaas le’eg kuma hadleene!!!!!!
mid keliya aan kuu sheego Xamar waxaa lagu kala tegay 1991 ilaa iyo dowladii C/laahi Yuusuf inta u dhexaysa maxaa looga dhigi waayey meel horumarsan ama ay nololi ka suurta gal tahay? Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed waxayna wax ku tahay in Soomaaliyi wada joogto maraasay horumaraysaa laakiin haddii fekerka Dabshid a qaato waxay noqonaysaa magaalo kala leh khadad cagaaran iyo isbaarooyin.
Dabshidoow iska daa qabyaalada aduunkii kaa reebtay.
May 3, 2021 - 7:55 pm
Ama rag iska dhig sida garqaad ama buraanburka jooji
Snm ka ragsan usc
Dal, Caasimad iyo Dadba waxaa
Kuu ah HARGEYSA IYO SOMALILAND
Qabyaalad ayaad uga soo carartey
Dowladdii Somaliland, markaas ayaad
Rajo ka qabtaa inuu nin Inan Layaal ah
Aad korjoogto ugu ahaato Koofur
FIQI SHINI intaan Korjoogto ugu ahaan
waxaa ii dhaanto inaan ISAAQ Marti ugu noqdo.
* Wadi dadkiisii ka carari intee lagu arkey
HAYAANOW DALKAADU WAA SOMALILAND
May 3, 2021 - 7:59 pm
Shirka Rooble u soo diyaargarow
hadde Kursigii Daarood oo Majeerten iyo Mareexaan
Isku heysteen wuxuu ku soo aruurey
ABSAME IYO MAJEERTEN
* Tuke waa leeyahey nasiib uu Caano ku helo
lkn maleh nasiib uu ku cabbo.
May 3, 2021 - 8:03 pm
Sheeko kale .iljeex hadaan madexweyne noqono raysal wasaare waa ugaadeen abgaalna waa majeerteen
May 3, 2021 - 8:06 pm
Ramadan karim Maryooley iyo afur wanaagsan🇸🇴🌙
May 3, 2021 - 9:00 pm
Hadda ma idinka iyo Majeerteen ayaa isku haysta kaalinta labadaad,?
Walee Mareexaan idinka ragsan kkk.Mareexaan Madaxwayne ku soo nowday oo Jabhadihii wadan diirtay ugu yimaadeen iyagoo halkii fadhiya kkk
Iswada haysta.Naxdii ay qaateen Reer Usc waadigaa arkaya Khayre oo Geeel qalanaya kkkkk
Hawiye haday noqdaan madaxwayne waxba uma dirtaan Raysal wasaare Daarood kkk
Meelahaa ayuu ku caajisaa.
Hadhoowna way islaayeen kkk
May 3, 2021 - 9:27 pm
Kkkk hanka kablax waa kaalinta labaad boowe laangabka erya qaata madexweyne anakana nasiya raysal wasaare sheekadu waa taas hawiye madobe taas ayaa waaleysa
Buurta saw ayaa bad noqoneysa
May 3, 2021 - 10:39 pm
Horta ninkaan dabshid ma ila aragtay xitaa golahaan waa looga kala tagay war waa qof xanuunsan
Qabyaalad unbuu afar sano iyo kabadan halkaan lataagan yahay subxaanalaah
May 3, 2021 - 11:12 pm
Farmaajo ma dukaan baa uga furnaa Buffalo mise shirkad. Shaqaale mushaharkiisa laga goosto cashuurta ku waajibtay mushaharka, ayuu ahaa, waxa goosta cashuurta mushaharka qofka u qaabilsan mushahar bixinta. Ninkaa waxa Somalida qaliban ku naceen waa hufnaanta iyo Somalinimada dadku u siman yihiin masuul ahaan iyo in aanu ku tagri falin hantidii qaranka. Kuwii dhici jirey baa hadda u jabhadaynaya si ay dalka qabiil ugu afduubtaan oo wax ugu dhacaan. Farmaajo shacab dhintay oo tuugo haysato buu is leeyahay wax u qabo. Qof iyo cod doorashadii umey soo dhaween xaq u soo noqday iyo waxay leeyihiin, aamus bay ku jireen min Saylac ilaa Beledxaawo iyo inta u dhaxaysa halkii dhulku farxad is qabsan lahaa; 20 ciyaala oo min 6 Dollar la siiyey baa ka qaylo dheeraaday oo xaqoodii dib uga duudsiyey oo waataa la qaatay doorasho dadban.
Caasimada waxa ku nool bey yidhaahdaan 3 Milyan, 12 tuug iyo xoogaa ay wax u tuuraan baa raba inay qabsadaan oo dadka ka raraan sida ka dhacday Siigaale ilaa Umbratooriyo Cariif ilaa Beermuda. Somalidiina gaadhsiiyey dareen ah in looga guuro eraygan aan dhamaadka lahayn iyo waayeel qabta Unukaa leh. 30 kii sanadood ee na soo dhaafay baa hore loogu samray. 3da Milyan iskama qabanayaan tuugta rabta dalku inuu dagaal sokeeyo dib ugu noqdo. Warlord xafaayad sita oo kaadidu iska dareerayso baa ilaa shalay hanjabayey hadda waa qorrax casar joogta, caasimada dadkii ku noolaa mar keliya ma odhanayaan dib ha noogu celinina wixii hore. Waxa la ii sheegay qofkii uu maalin asxaan u sameeyey guurguurte wuxuu taagan yahay dalka ila burburi, Allaah Kariim, waxaad arki doontaan in la xayiro hantida uu ilaa South Africa ilaa Turkey dhigtay iyo waxa bangiyada ugu jira, gal dacwadeed baa ilaa 8 wadan laga furay. “Cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaa” “loogaw laguu maxkamad fadhiyee”
May 3, 2021 - 11:27 pm
waar niyoow meeshan in laga mamnuuco weeye qaar cawaana oo ku dawakhaya qufku wuxuu qoro ayaa ku badan iyo qaar ay reero ka dhex hadlayaan
sargaalka waa in uu qaar daweeyaa siduu u daweeyey gedo land
May 3, 2021 - 11:35 pm
vila wardhiiglay shaqo kalaba ma hayso meeshii wax laga sheegaba jawaab deg deg ayey u hayaan
madaxwayne deni xogtuu bixiyey ayaa cadaynaysa in aarmaajo waalan yahay kuwa uu qortay ee la taliyayaana ay isku level yihiin
Warka Culumada maxaa ka jira.
May 3, 2021 - 11:50 pm
Waa hangool aan hadheyn wuxuu joogaa 91dii kuye snm karagsan USC eedo batuula reer iwm sidaas ayaan kuwa joogney lixdii sano ee dambeysey meeshan kalshaale dad badan kudawakhey
May 3, 2021 - 11:59 pm
Macangag Farmaajo wuxuu kaloo sharci kulahaa
Canada oo hooyadiis deganayd ayuu iska dhiibey
Mar uu muddo joogey Canada
Sidoo kale DOWLADDA USA ayaa codeysay reason
Uu dib ugu celiyey Sharciga Dalkaas inuu yahey
SI AAN LOO DAABACIN LACAGAHA
uu ka soo xadey Xamar taas oo la ogaankaro
A/c kasto oo uu dalkale ka furtay.
Maxaa yeelay Waa inuu qofkasto oo
Muwaadin AMERICAN ah CADDEEYO
INCOME iyo EXPENSES sanad kasto.
– Warshad sonkor oo islaantiisu ka
Furatey AFRICA waa la sheegahayey.
* Nin xadey KURSIGII QARANKA,
Maxay la tahey inuu rarto CANSHUUR HAWIYE
May 4, 2021 - 12:01 am
Beesha kuumade oo ah beesha u tiro badan dadka AF soomaliga kuhadla ah 10 million tirakobkii udambeyey .ayaa waxay leedahay culimada soomalida ugu badan suugaanta ugu badan wabiyada ugu badan gaaska ugu badan dhulka ugu badan .dadku waa absame iyo in kacuqdadeysan xayaa rooble waa ugaaden reer sacad ah waa sidàas .nin galxamur iyo bookh maad timadid waa barwaaqee
May 4, 2021 - 12:04 am
Daaroodku waa iskala qabweynyahay waawareey yaa reer hebel aheey waryaa daarood aheey waaba kula yaabayaan kuwana yaa hawiye aheey iska daaye waxay maraysaa yaa irir samaale aheey war bahasha maskaxdaa ilaah baa bixiya
Qoraladaada waan kahelaa funny aa tahay .meeshaba adaa shida hada kadib diiriye ayaa lagu dhahaa
May 4, 2021 - 12:10 am
Irir waxaa liosameystay darood macnaha cabsi.jabouti dhulku waa 130km dadkedu waa waxkayar hal million waxaa ubadan canfar ani waan arkay.somaliland hartiga iyo isaaq waa isle eg .markaa in lasaso waa gartood.halayaabin sxb
Inta laga helaayo dowlad sharciga iyo heshiis bulsho ilaalisa waa loo bahan yahay
USC oo ku xoogan degaanka VILLA SOMALIA somalia waxay kaloo u bahan tahay
Reer walba inuu degankisa dhisto hadaad degankada nolol ka samaysan waydo
Sharcigna iyo dowladnimdiina la boobo u adkayso GUUXA iyo GOOLAFTANKA
USC oo macneheedu yahay adoo dulsaar ah ha dhibsan hadalada dadka xamar
Xooga ku jooga
May 4, 2021 - 12:11 am
Labo Qaawan isuma yeerato
Hadduu Daarood isu yeerto soo
Laga soo saarimahayo
Caasimadaha Irir Samale
Ma waxaad ku celin rabtaa Wasaqdii NAIROBI
mise qaboobihii Qurbaha
– Harka yaan la iska saarin
Tuulooyinkii Alley badey habeen laguma hoyankaree
May 4, 2021 - 12:13 am
May 4, 2021 - 12:14 am
Safiirka cusub waa nin jidwaaq absame ah abakuul ah @dabshid waa dhaxdhaxaad ee hacabsan xaga adeerkii maha
May 4, 2021 - 12:22 am
Nin ninku soo Absame maahan
Waqti fiican ayuu ku soo aadey
Tankale kii hore soo Murusade maaheyn
Waqtigaas oo Kheyre iyo Seedigiis
Farmaajo joogeen Villa Xamar.
May 4, 2021 - 12:25 am
Ixtaf…..sheeko page hoose.
Abti aniga wax kaama sheegin.
Waxaan dhahay keliya Ixtaf haddii gadaal gadaal loo aqriyo magaceeda waa Fatxi.. kkkjkkk
Kollay adiga Sacad aa tahay waayo Baho Cali Yonis qof Hawiye yaqaan ma jiro..Cumar Maxamud ayaa kugu filan..kkkk
Aniga Hawiye waa jeclahay wax nacayb ah uma qabo waayo hooyaday waa Hiraab waa haddii Sheekhaal Hiraab tahay..och
Hooyaday waxay kasoo jeedaa reer Abaadir, Dirirdhaba
Sheik Abaadirow soo aruuri caashaqa.
By hees Xasan Adam Samatar.
Waxaan kale oo ku abtirsadaa Sayid Maxamed, Darwiishkii waxaa kale oo ku abtirsadaa SYL…intaas Walaahi in been ku darin.
Waxaan ahay Majeerteen, Maxamud Saleban, Cumar Maxamud..taasna waa run.
Aniga Xamar ku dhashay, weligay beel Somaliyeed qabiil uma necbaan waayo waxaan ogahay in dadka walaalo yihiin.
Aniga Dictator necbahay xitaa hadduu walaalkay yahay.
I want Free, Federal and democratic Somali People.
I have no reason to argue with young somali Lady..
Waan ogahay in Hawiye u caydo in guubaabiso sida Cadaado..gabar yar oo qabiil guubaabinayso markaan arkay; laahay hanoo maxariisto Somali.””””
May 4, 2021 - 12:26 am
Ma runtaybaa! In aabahaa Hawiye/Habargidir yahay oo hooyadaa Cumar Maxamud tahay..
Asxaabta Kalshaale intaas u xaqiiji..si kaftanka noogu tooso.. kkkk👍
May 4, 2021 - 12:34 am
Kkkkk waa ku jedaa inaad martida u Qaracayso musigii iririsam iyo barbaarta
Miyadan ka baqayn inaan Qaadi karno helow garisa helow jigjiga heloow kismayo
Heloow garoowe heloow baardhere
May 4, 2021 - 12:35 am
Kkk xili fiican xataa wacdan iyo mobileen ayaa qoryaha qaatay
May 4, 2021 - 12:37 am
In reer adeerkaa caydo adoo guubaabinayso, dadka inta ku fahmin kuu arkaan, gabadhaan Hawiye necebtahay tahay.
Aniga ma qarsado cidda ahay..Cumar Maxamud..Baho Cali Yonis sida adiga ugu yeertay..weligay bah ma sheegay..
Habar Yonis, Habarjeclo, Habar Awal (Habar Xabuusheed) Habargidir, Habar Majeerteen iyo Habro oo dhan ayaa Yaabay….kkkjkkk
Somalidu waa Habro iyo Geegii Mariide Daarood ahaa.kkkkk@😁
Dib u dhig Hello hello, hadda waxaa joogo
dhagoole aan maqleyn warkiina.
May 4, 2021 - 12:41 am
Ha i oran waa igu tuftay marka aqriso my comments.
U jeedayda maaha taas..
Ka jawaab lee fikirkayga.🇸🇴🌙
May 4, 2021 - 1:33 am
Aniga waxaa ii muuqda Ruug cadaagii soo rogal celikkkk
Jabhadii wasakhda ahaa ee Etopiya adeesatay ee dhulka dhigay Somaliya,deedna waayay dadnimo ay wadankii ku hogaamiyaan oo 3 u kala jabay.
Dayday Tulo ku habsaday oo Dabadhilinimadii ku xoogsada,qayb Diimo iyo dhaatiyo diimeed xidhay iyo qayb Mooryaannoqotay.
.3daa kooxood oo isbarakan ayay Somaliya dhex taalay.
Halkaa iyaga oo rafanaya ayuu kacasnkii barakaysnaa iyo dhashiisii wadanka dib ugu soo noqday,2017.
Jaale Formaajo ayaa hogaan u ah.
Waxaa isbadalay luuqadii siyaasada ee Somaliyeed.
Xoogagga wadanniiyiinta ayaa hugunka muujiyay Jugta iyo jaanta ayaa laysla helay.
Waran iyo hadafka oo sare u kacay.Himilads ayaa isbashay.Waxaa dhaqaaqay qarannimo..
Kooxihii cabsida dareemay.
Waxaa jiifka ka soo kacay Somalidii doorsoontay iyo Ajaanibkii adeegan jiray.Qayladu way isgaadhay.Faroolaa soo galay dagaalka.
Dee xaalku wuxuu marayaa halkaasi.
May 4, 2021 - 1:38 am
Oday damiin habaar baa ka soo haray ,hays karaamo tirin habaar lagu kari waaye. 8 feberaury hadii lagaaro darbiyadaan uga daadaneynaa,haye ,banana baxa haduu diido xamar waan ka saareynaa,haye waxaa ku xigtay war albaabka naga fura ma yahuud baa tihiin,hada waxay mareysaa lama tartameyno farnaajo ee hays ka tago,barina waxaa ku xiga aar farmaajo iigeeya,qoladaani waa beeso iyo badar.
May 4, 2021 - 2:34 am
Aniga hg ah hooyadayna B cali yonis like awoowow khalaf madabow madobe astakhfurulah 😂
Dhiiga hoose iga jirta ariintas
Tan ah maxa hawiye halkan kaga cayda waa xaqiiqda ciidna kama baqo ciidna kaba oma siido
Waxan hawiye la’a jeclahay wuxu isaka leeyahay inusan marti ka noqon!
Inay labo mid soo galan oo maalin baa nin faqash ah shar uso xiran
Sidaan camal hadhowna sidi falastin bananka ama falastinta waqoyi camal
Inay dhahan somaliyey hadad is diiday federal garbo simaan aan qaybsano nin walbe iyo toladisa iyo magalkisa oo wax iyo meel cad la iskugu imaado afarti sanaba dasturkana laga soo bilaabo desha
Hadi kale inay san u kala exaan faqashta oo dhaman reer abtiyashay meel laga istaago
Hawiye siyaasi misaan culus leh oo hal xisbi ah kenaan kadibna siyaasad dadka ka gadmi karta kenaan
Laakin marki hawiye hubaysan yahay cidanka la iska horkenayo waa hawiye labada dhinacba like dhulos 😂 waa qasaaro wixi beesha calamka Somalia ka daweynaysay in lagu tilmamo tolkay iyaago maalkodi iyo beydkoodi marti lagu yahay waxa u sabab ah 34 musharax ee hawiye
May 4, 2021 - 2:46 am
@land of udug
Farmaajo family dhow baa nahay wixi habara waa nicbahay waana habara aniba 😂 abahay Rooble Farmaajo waxa kala dhalay 3 islamood cusman maxamud ah lol dawladan gacan baa u tahay qarabo aruuris
Waa dawlad barakaysan waa soconaysaa
Hiraab 8sano iyo siyaado lee joogeen yaa u diiday inay dhistan dawlo quruxsan
Markay farta kula qabsanayaan cadalad Allah bay taqane
Ninka sii kale halagu saaro 😂
May 4, 2021 - 7:50 am
Farmaajo hooyadiis waa Dhuloos, Maxamud Garaad.
Ayeydiis ayaa Cisman Maxamud ah, waxaan aqaan qaraabadiisa.
Jalaf iyo Khalaf hadday iska dhaleen naag culus baa tahay. Kkkkkkkk
Cadaado ayaa oran jiray marna waa iswastaan marna dagaal iclaamisaan marna hoosta iskala shaqaysataan…kkkkkkk waa runtiis.
May 4, 2021 - 7:56 am
Farmaajo wuxuu go’aan ku gaaray in Villa Somalia kasoo bixin ama la isdilo.
Mareexaan ka yeelimayno inay markale dalka god ku ridaan.
Tolnimo u difaaci maayo dictator yar oo macangag ah.
Waa anti federal
Waa anti democracy
Waa clanish, beelo gooni ah cadaawad u qaba.
Waa manoplitive qofka ku danaysanayo been u sheega.
May 4, 2021 - 8:06 am
Abti kkk federal ciid diiday ma jidho 😂 putland waxay u xiistay baadi aad ka qadi jirtay madaxdi hiirab 😂 daaroodku isma baado
May 4, 2021 - 8:19 am
Oday Faroole oo aad uga cadhooday in Formaajo wali joogo Villa Somalo kkkk,
Iyo war ka soo yeedhay.
Kuye,inaad Geel qalataan oo iska sheekaysaan,may ahayn wixii aan isku ogayn kkk
Dhaafa Geelan aad qalanaysaan oo wada dagaalka oo Ninka ka saara magaalada.
Ragii oo Geel iska qalanaya kkkkk
Iyo Faroole oo ka seexan waayay sida wax u socdaan.
May 4, 2021 - 8:29 am
Mahbar calaacalka jooji ,somaliya waxaa halkaa dhigay was idinkee 77amxaaro u jaajuus , 2006 mar labaad amxaaro ku soo hogaami dalka oo villa somaaliya calankii gumeystaga madaw ka sur oo is dul taag waa masiibada ku dhacday umada sonaliyeed, general genre iyo ciidankiisii caana iyo biyaha ka daba qaada dadka muqdisho ku gumaada was taariikh qoran.60,000. (lixdan kun ) oo quf dhimasho, dhaawac =87,643 of,barac ceelasha biyaha=2,875,500. (laba milyan sided boqol todobaatan iyo dhan kun iyo shan boqol oo quf, hanti la dhacay suuqa bakaaraha , goobo caafinaad iyo guryo la burburiyey dad lol dhoofooiyey adis ababa ,dad la gatay = darsiish+saciid dheere. Gabdho la kufsaday , waxaas oo dhibaato ah mahbar bay diiwaanka ugu jirtaa , lagu lana xisaabtami doonaa, nin walba waxa uu geystay baa laga gudayaa. Hays oran cidi idinma ogee meelaha carcarar.